iMovie Guide: A Buuxi Tusaha iMovie
A Guide Comprehensive in iMovie
iMovie waa aalad tafatirka cajiib ah Mac oo kaa caawinaysaa in aad si aad u hagaajisid madadaalada digital si weyn. Waxaad ka qaadi kartaa filimada dheeraad ah, sida edit midabka iyo maqal ah, hagaajin gariir video, oo aad ku helayso laga yaabaa in ay gacanta ku aad u baahan tahay in la simi baxay qaybaha xunxunna. Halkan waxaa ku qoran dhowr Casharrada waxtar leh in aad adigu isaga oo ka jawaabaan su'aalo iMovie aad doonaa.
20 iMovie Talo & Tricks aad ka ogaato
iMovie waxa uu noqday mid ka mid ah barnaamijyada video tafatir dheeraad ah oo caan ah si ay u waajahay toos ah, fursado badan oo xaqiiqda mahad in ay timaaddo oo lacag la'aan ah iyadoo kasta Mac cusub. Haddii aad tahay qof user iMovie ah iyo raadinayso siyaabood oo wax ugu soo baxay software, waxa jira 20 tricks aad u baahan tahay in aad ogaato.
iMovie Video Tutorial
iMovie waa cadaalad ah dareen leh oo bixiya hawlaha video tafatirka kala duwan iyo qaar ka mid ah saamaynta video wax badan ka sii fudud oo guriga loo isticmaalo. Hawlaha Kuwaas ama waxaa loo isticmaali karaa ka tafatirka Ujeedada fudud ama qaybo ka mid ah diyaarinta mashruuc video final. Tutorial waxa uu iftiimin doonaa qaar ka mid ah qalab muhiim ah iMovie bixisaa.
Hel ah Best iMovie Alternative for Widnows
iMovie gelineya inaad si aad u eegto, edit iyo share filimada. Laakiin haddii aad tahay user Windows ah oo doonaya in ay sameeyaan filimada guriga kula wanaagsan software video tafatirka, ka dibna waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay iMovie barnaamijyada Windows. Halkan shan dhan-in-mid iMovie barnaamijyada PC ayaa lagula talinayaa.
Guba iMovie Video inay DVD
Marka dhameysan mashruuca iMovie aad, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad dhoofin iMovie in DVD inay si fiican u badbaadin ama u wadaagno. Iyada oo taageero ka iDVD, waxaad si fudud u gubi kara iMovie in DVD. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad xaqiiqsato in iDVD hadda lama soo bandhigay ama guraa oo qayb ka ah xirmada iLife ah. Xaaladdan oo kale, waxaa si weyn lagu talinayaa ah dhinac saddexaad Mac DVD software gubanaya.
Talooyin Dhibaatooyinka u iMovie Common Arrimaha
dhibaatooyin iMovie aad u soo dhaadhacday? Ha welwelin! Tani hoosaadka ee tilmaan iMovie waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad dhibta arrimaha laga yaabaa in aad haysato. Hadda eegno qaadan hoose oo xal u ah dhibaatada aad isagoo la iMovie heli.
Dejinta Nooca kala duwan ee warbaahinta ay u iMovie
iMovie aad u baahan tahay in ay ku shuban warbaahinta mashruuca si aad u sii edit karaa. The files aad dajiyaan laga yaabaa in la codec iyo qaabab kala duwan soo. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin iMovie in ay hoosta ka xariiq sida ay u dajiyaan noocyada kala duwan ee warbaahinta.
iMovie Video Tutorial: Baro Sida loo isticmaalo iMovie
iMovie waxaa bixiya hawlaha video tafatirka aasaasiga ah ee ka badan fudud oo guriga loo isticmaalo. Halkan waa ururinta iMovie video tutorial oo qaar ka mid ah qalab muhiim ah iMovie bixisaa muujineysaa. Hadda raaci tutorial video si ay u bartaan sida loo isticmaalo iMovie ah.
Siyaabo kala duwan oo ay u dhoofinta Mashaariicda iMovie
Marka dhan tafatirka la sameeyo, aad mashruuca waa in la dhoofiyo si ay u jiri karaan sida filim. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha caadiga ah si ay u dhoofiyaan aad mashruuca mar tafatirka uu soo dhamaaday.
Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in dhoofin iMovie in DVD. Sida iDVD aan la heli karin in cusub Mac OS X, waxaa loo baahan yahay software-saddexaad Mac DVD gubanaya si ay u gubaan DVD ah ka iMovie.
iMovie for Windows lagu bedelan karo
Maxaa dhacaya haddii aad tahay user Windows ah oo doonaya in ay sameeyaan filimada guriga kula wanaagsan software tafatirka video sida iMovie? Halkan waxaan ku talinaynaa shan iMovie wanaagsan u bedela Windows.
Hel ah Best iMovie Alternative
Inkastoo iMovie waa wanaagsan ee waxa ay qabato, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale rabaan in ay helaan qaar ka mid kale oo iMovie hufan u qanciyo baahida video tafatir oo dhan. Halkan waxaan ku qor doorasho wanaagsan qaar ka mid ah.
Isticmaal iMovie dhisay-in mawduucyada si aad video muuqan dheeraad ah oo xirfad leh oo firfircoon.
Ku isticmaal ugu iMovie isjiidka in la sameeyo Hollywood sida videos guriga fudayd.
Ku dar video iyo saamaynta audio si aad video clips ku iMovie si kor videos goobtii.
Ku dar music soo jeeda mashruuca iMovie aad si aad video dheeraad ah oo ku cad.
Iyada oo taageero ka plugins iMovie kala duwan iyo qalab kale, in ka badan hawlaha video tafatirka waxaa la samayn karaa.
iMovie Tricks & Talooyin
20 iMovie tricks iyo talooyin kaa caawinaya in aad sida ugu badan uga of software this.
dhibaatooyin iMovie aad u soo dhaadhacday? Ha welwelin! Tani hoosaadka ee tilmaan iMovie waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad dhibta arrimaha laga yaabaa in aad haysato. Hadda eegno arrimaha iMovie caadi ah oo ay helaan xal u yihiin dhibaatada aad isagoo la iMovie.
iMovie: Dhoofinta Mashaariicda ama Video ka iMovie
20 Tricks iMovie aad ka ogaato
Sida loo isticmaalo iMovie Ken Burns Saamaynta iyo saar iMovie Ken Burns
[Sloved] Sida loo soo dhoofsadaan mts in iMovie
2 siyaabaha ay gubaan iMovie in DVD
Sidee in ay soomaan weeraryahanka in iMovie on Mac / iPad
Video abuurka oo ku iMovie iyo Wondershare Video Converter
Sida loo sameeyo Movie Time-burayaa ee iMovie
iMovie kala jabeen screen on Mac / iPad / iPhone
Sida loo Negaanshaha Shaky Videos in iMovie
> Resource > iMovie > iMovie Guide: A Buuxi Tusaha iMovie